Mugovera 4 Chikumi 2022
Imba Yemukati Imba yekumaindasitiri imba ine zvinodziya. Imba ino inogadzirira akati wandei mabasa kune vatengi kusimudzira hupenyu hwehupenyu. Mugadziri akaedza kubatanidza mapaipi kunzvimbo imwe neimwe uye mapuranga akasanganiswa, simbi uye ENT kuratidza nyaya yehupenyu hwevatengi. Izvo hazvina kufanana neyakajairwa maindasitiri maitiro, imba ino inoisa mashoma mavara uye inogadzirira mizhinji nzvimbo dzekuchengetera.
China 2 Chikumi 2022
Chilled Cheese Trolley Patrick Sarran akagadzira iyo Coq cheese trolley muna 2012. Kushamisika kwechinhu ichi chinotenderera kunofadza kuda kwevanodya, asi urege kukanganisa, ichi chiri chishandiso chinoshanda. Izvi zvinowanikwa kuburikidza nesyylized varnished beech chimiro chakapfekerwa ne cylindrical red lacquered cloche iyo inogona kumisikidzwa padivi kuratidza pachena assortment yemateya akatsvuka. Uchishandisa mubato kufambisa ngoro, kuvhura bhokisi, kutsvedza bhodhi kunze kuti uite nzvimbo yenzvimbo, uchitenderedza disc iyi kucheka zvikamu zvechizi, anomirira anogona kuvandudza maitiro acho kuita chidimbu chidiki chekuita hunyanzvi.
Chilled Renje Trolley
Chitatu 1 Chikumi 2022
Chilled Renje Trolley Iyi nharembozha yekuratidzira yekubatira dhiziri mumaresitoreni yakagadzirwa muna 2016 uye ndicho chinhu chazvino chikamu muK range. Iyo Inotapira-Kit dhiza inosangana nezvinodiwa zvekusimudzira, kufambisa, huwandu uye pachena. Iyo yekuvhurwa michina yakavakirwa pete inotenderera yakakomberedza acrylic girazi disc. Mhete mbiri dzebeech dzakaumbwa ndedziya dzinotenderera pamwe nekuva iwo mabatiro ekuvhura kesi yekuratidzira uye yekufambisa trolley yakatenderedza muresitorendi. Izvi zvakabatanidzwa zvinhu zvinobatsira kumisa chiitiko chebasa uye kusimbisa zvigadzirwa zvakaratidzwa.
Inopisa Doro Sevhisi Nezvitsva Zvidyarwa
Chipiri 31 Chivabvu 2022
Inopisa Doro Sevhisi Nezvitsva Zvidyarwa Patrick Sarran akagadzira Herbal Tea Garden sechinhu chakasarudzika cheLandmark Mandarin Oriental yeHong Kong muna 2014. Maneja weCustomer aida trolley paangaite mhemberero yetiye. Iyi dhizaini inoshandisa zvakare macode akagadziridzwa naPatrick Sarran mune yake K Series trolleys, kusanganisira iyo yeUKZA kottage trolley uye iyo Km31 multfunctional trolley, inosimudzirwa neChina nyika chimiro.
Muvhuro 30 Chivabvu 2022
Champagne Trolley BOQ inguruve yekugezesa trolley yekushandira champagne kunzvimbo dzinogamuchirwa. Iyo yakagadzirwa nehuni, simbi, resin uye girazi. Yakatenderedza symmetry inorongedza zvinhu uye zvinhu sechinhu chakakosha pakugadzira. Mafirita akajairwa akakwenenzverwa mu corolla, musoro pasi, pasi peguchu retiresi, rakadzivirirwa kubva kuguruva nekuvhunduka. Rondedzero yacho, inenge yemaruva, inokoka vashanyi kuti vagadzire denderedzwa kuti varavira rakakosha rinwiwa. Asi kutanga kwezvose, iyo inoshanda nhanho inowanikwa yea waiter.
Mugovera 28 Chivabvu 2022
Poise Mwenje Chipiri 28 Chikumi
Memento Tsamba Yekuvhura Muvhuro 27 Chikumi
Exxeo Yakasarudzika Hybrid Piyano Svondo 26 Chikumi
Imba Yemukati Chigaro Chilled Cheese Trolley Chilled Renje Trolley Inopisa Doro Sevhisi Nezvitsva Zvidyarwa Champagne Trolley